Israa’iil oo daandaansigii ugu darnaa billowday (warbixin)
Home » WARARKA MAANTA » Israa’iil oo daandaansigii ugu darnaa billowday (warbixin)	Israa’iil oo daandaansigii ugu darnaa billowday (warbixin)
19/03/2017	2,228 Views Wasiirka gaashaandhigga Israa’iil Afigdor Liberman ayaa ku hanjabay in burburinayaan nidaamka difaaca circa ee Suuriya, haddii aysan ciidamada Suuriya ka joogsan duqeymaha ay la eeganayaan diyaaradaha dagaalka Israa’iil.
Hadalka wasiirka ayaa waxa uu imaanayaa xilli goor sii horreysay diyaaradaha dagaalka Israa’iil lala eegtay gantaallo ay soo tuureen ciidamada Suuriya.
Liberman, oo duqeymaha Suuriyaanka ka hadlayay, ayaa wax uu sheegay in ay tahay markii labaad oo ay ciidamada Suuriya gantaal la beegsadaan diyaaradaha dagaalka Israa’il xilli ay howlgal ka wadeen Suuriya.
War-murtiyeed ka soo baxay ciidamada Israa’il ayaa lagu sheegay in diyaaradahooda dagaalku ay jimcihii tegay weerarro ku qaadeen goobo ku yaalla Suuriya; balse taas beddelkeeda ciidamada Suuriya ayaa sheegtay in ay soo rideen diyaarad ay Israa’iil leedahay.
Warka ka soo baxay ciidamada ayaa waxa uu intaas ku daray in askarta dowladda Suuriya ay dhowr gantaal ku soo tureen diyaarado dagaal oo ay Israa’il leedahay, kuwaas oo ku sii jeeday dhanka hawada Israa’iil. In kasta oo aan la sheegin wax khasaaro ah oo ka dhashay.
Ciidamada Israa’il ayaa tilmaamay in marka ay askarta Suuriya gantaallada soo tuurayeen ay diyaaradahoodu ku jireen duqeymo ay la beegsanayeen kolonyo hub iyo saanad kale u sidday kooxda Xisbullaah ee ka dhisan Lubnaan.
War ka soo baxay dhanka Suuriyana waxaa lagu sheegay in afar diyaaradood oo Israa’il laga leeyahay ay ku soo xadgudbeen hawada Suuriya, ka dibna ay bartilmaameedsadeen xarumo ciidan oo Suuriya ku yaalla; arrintaas oo sababtay in ay ciidana Suuriya is difaacaan, oo diyaarad kuwii weerarka waday ka mid ah soo ridaan, intii kalena cayrsadaan.
Previous: Ra’isul-wasaare Kheyrre oo soo-jeedin muhiima u diray Galmudug
Next: Qarax caawa ka dhacay degmada Kaaraan iyo haweenay la dilay